Roob mahiigaan ah oo dhaliyey khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo ka da’ay Hargeysa… – Hagaag.com
Roob mahiigaan ah oo dhaliyey khasaaro nafeed iyo mid hantiyeed oo ka da’ay Hargeysa…
Shan qof ayaa u geeriyootay, sagaal kalena waa ku dhaawacmeen ka dib markii Roobab waaweyn oo khasaare dhalliyey ka da’ay magaalada Hargeysa.
Roob mahiigaan ah oo xalay ka da’ay magaaladda Hargeysa, waxaanu dhaliyey khasaaro badan oo dhimasho, dhaawac iyo burbur hantiyeedba leh, saddex qof oo gaadhi la socday wuu qaatay, laba qof oo kalena koronto ayaa ku dhegtay, halka sagaal kale ciidamada amnigu ka badbaadiyeen daadadka.
Sidoo kale, guryo badan ayuu ka qaaday jingadihii, halka guryo bandanna uu daadad xoog badani ugu soo galeen guryahoodii.
Madaxweynaha Somaliland, mudane Muuse Biixi Cabdi oo xalay kormeeray khasaaraha roobku keenay ayaa ka tacsiyadeeyey qoysaskii ay ka baxeen shanta qof ee geeriyooday, sidoo kale, waxa uu tilmaamay in talaabooyin laga qaadi doono shirkadaha laydhka ee sida fudud laydhkoodda dadka ku dilayo.
Ciidamadda booliska iyo kuwo dab-damiska ayaa kaalin weyn ka qaatay intii roobku ka da’yey badbaadinta dadka uu halista galiyey daadadkii soo rogmaday, gaar ahaan qoysaskii deganaa goobaha biyo marineedda ah oo qaar badan uu guryahoodii qaatay.